६ वर्षपछि मनाङ हुम्डे विमानस्थलमा जहाज ! लिएर पुगे मुख्यमन्त्री गुरुङ::देश र जनताप्रति समर्पित
६ वर्षपछि मनाङ हुम्डे विमानस्थलमा जहाज ! लिएर पुगे मुख्यमन्त्री गुरुङ
हुम्डे (मनाङ) – ६ वर्षपछि हुम्डे विमानस्थलमा समिट एयरले उडान भरेको छ।
पक्की धावनमार्ग बनेसँगै बन्द हुम्डे विमानस्थलमा शुक्रबारगण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल, मनाङका संघीय सांसद पोल्देन छोपाङ गुरुङ, प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याल, प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी बिनोद शर्मा घिमिरेलगायत १५ यात्रु पोखरा विमानस्थलबाट हुम्डे पुगेका थिए ।२०७० देखि बन्द विमानस्थल सञ्चालनमा सफल भएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६९७० मा ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर यसअघिको ६ सय मिटरको धुले धावनमार्गलाई विस्तार गरी ९ सय मिटर ल्यापटप (कालोपत्रे) गरेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन मन्त्री तथा प्राधिकरणका अधिकारीहरु चढेर मंसिरमा धावनमार्गमा हवाइजहाज परीक्षण गरिएको थियो । त्यसयता कुनै पनि जहाज मनाङ आएको छैन । कालोपत्रे भएको २ बर्षपछि तारा एयरको डोर्नियर जहाजले परीक्षण उडान गरेपनि निरन्तरता दिन सकेन ।
१ वर्षअघि एउटा ट्वीनअटर जहाजले चार्डर उडान भरेको थियो । पछिल्लो समय असार २० गते र त्यसअघि पुस २४ गते जहाज उडाउने तयारी गरिएको थियो । तर, सफल हुन सकेको थिएन ।मनाङमा नेपाल वायु सेवा निगमको ट्वीनअटर जहाजले मात्रै उडान भर्दै आएको थियो ।पोखरा-मनाङ वा मनाङ-पोखरा हुँदा करीब २५ मिनेट लाग्छ । ३ हजार ३ सय ३० मीटर (११ हजार १ सय ४५ फिट) उचाइको हुम्डे विमानस्थलमा २०३९ साल असोजबाट उडान सुरु गरिएको थियो ।मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मनाङको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।